44 “Ugbu a, gee ntị, gị Jekọb ohu m,+ geekwa ntị, gị Izrel, onye m họọrọ.+
2 Nke a bụ ihe Jehova kwuru, bụ́ Onye kere gị+ na Onye kpụrụ gị,+ onye na-enyere gị aka malite mgbe ị nọ n’afọ,+ ‘Atụla egwu,+ gị ohu m Jekọb, atụkwala egwu, gị Jeshurọn,+ onye m họọrọ.
3 N’ihi na m ga-enye onye akpịrị na-akpọ nkụ mmiri+ ka ọ ṅụọ, meekwa ka iyi nke na-asọ nwayọọ nwayọọ dịrị n’ebe kpọrọ nkụ.+ M ga-awụkwasị mkpụrụ gị mmụọ m,+ wụkwasịkwa ụmụ gị ngọzi m.
4 Ha ga-epulite dị ka ahịhịa ndụ,+ dị ka osisi pọpla+ ndị dị n’akụkụ ọwa mmiri.
5 Otu onye ga-asị: “Abụ m nke Jehova.”+ Onye nke ọzọ ga-akụrụ aha Jekọb,+ onye ọzọ ga-edekwasị n’aka ya: “Abụ m nke Jehova.” Mmadụ ga na-etu onwe ya aha Izrel.’+
6 “Nke a bụ ihe Jehova, bụ́ Eze Izrel,+ Onye Mgbapụta ya,+ Jehova nke ụsụụ ndị agha, kwuru, ‘Abụ m onye mbụ, abụkwa m onye ikpeazụ,+ ọ dịghị Chineke ọzọ dịnụ ma e wezụga m.+
7 Ònye yiri m?+ Ya tie mkpu kwuo ya ma gosi m ya.+ Malite mgbe m họpụtara ndị biri n’oge dị anya gara aga,+ ka ha kọọ ma ihe ndị gaje ime ma ihe ndị ga-eme n’ọdịnihu.
8 Unu atụla ụjọ, ya ejukwala unu anya.+ Ọ̀ bụ na mụ emeghị ka unu nụ ya n’otu n’otu, kọọkwara ya unu malite mgbe ahụ?+ Unu bụ ndị àmà m.+ Ọ̀ dị Chineke ọzọ dịnụ ma e wezụga m?+ Ee e, ọ dịghị Oké Nkume dịnụ.+ Ọ dịghị otu mụ onwe m ma.’”
9 Ndị niile na-eme ihe oyiyi a pịrị apị bụ ihe efu,+ ihe ndị ahụ ha hụrụ n’anya agaghịkwa aba uru ọ bụla.+ Dịkwa ka ndị àmà ha, ha adịghị ahụ ihe ọ bụla, ha amaghịkwa ihe ọ bụla,+ ka ihere wee mee ndị na-eme ha.+
10 Ònye kpụrụ chi ma ọ bụ mee ihe oyiyi a wụrụ awụ?+ Ọ dịghị uru ọ bara ma ọlị.+
11 Lee! Ihere ga-eme ndị òtù ya niile,+ ndị omenkà ya bụ ụmụ mmadụ. Ha niile ga-ezukọta.+ Ha ga-eguzo otu ebe. Ụjọ ga-ejide ha. Ihere ga-eme ha n’otu mgbe ahụ.+
12 Ọkpụ ụ́zụ́ nke ji ihe o ji akpụ ụ́zụ́ ji ya na icheku ọkụ na-arụ ihe; o wee jiri hama na-akpụ ya, jirikwa ogwe aka ya dị ike na-arụ ya.+ Agụụ agụwala ya, ike adịghịzi ya. Ọ ṅụbeghị mmiri; ike wee gwụ ya.
13 Onye na-eji osisi atụ́ ihe esetịwo eriri e ji atụ̀ ihe. Ọ na-eji nzụ uhie ese otú ọ ga-adị. Ọ na-eji ihe e ji akpụcha osisi arụ ya. Ọ na-eji mkpịsị ígwè ese otú ọ ga-adị. O wee mee ka o yie mmadụ,+ mee ka ọ maa mma dị ka mmadụ, o wee debe ya n’ụlọ.+
14 Ọ dị onye ọrụ ya bụ igbutu osisi sida. Ọ na-ahọrọ otu ụdị osisi, bụ́ oké osisi. Ọ na-ahapụ ya ka ọ kaa akaa n’etiti osisi ndị dị n’oké ọhịa.+ Ọ kụrụ osisi lọrel, mmiri ozuzo na-emekwa ka ọ na-eto.
15 Ọ ghọọla ihe mmadụ ji eme ka ọkụ na-enwu. O wee gbubiri nke ọ ga-eji nyaa ọkụ. Ọ na-akwanye ọkụ wee mee achịcha. Ọ na-arụ chi ọ ga na-akpọrọ isiala.+ O mewo ka ọ ghọọ ihe oyiyi a pịrị apị,+ o wee na-adara ya n’ala.
16 Ọ na-erechapụ ọkara ya n’ọkụ. Ọ na-eji ọkara ya ahụ anụ ọ na-ata, afọ ewee ju ya. Ọ na-anyakwa ọkụ, sị: “Ehee! Anyaala m ọkụ. Ahụla m ìhè ọkụ a.”
17 Ma ọ na-eji nke fọrọ afọ pịa chi, bụ́ ihe oyiyi ọ pịrị apị. Ọ na-adara ya n’ala, kpọọrọ ya isiala, kpekuo ya ekpere, sị: “Napụta m, n’ihi na ị bụ chi m.”+
18 Ha amaghị,+ ha adịghịkwa aghọta,+ n’ihi na a nyachiwo anya ha ka ha ghara ịhụ ụzọ,+ nyachiekwa obi ha ka ha ghara ịghọta ihe.+
19 Ọ dịghị onye ọ na-agbata n’obi,+ ọ dịghịkwa onye maara ihe ma ọ bụ nwee nghọta,+ sị: “Erechapụwo m ọkara ya n’ọkụ, werekwa icheku ọkụ ya mee achịcha; m ji ya hụọ anụ wee taa. M̀ ga-eji nke fọrọ afọ pịa ihe arụ?+ Ọ̀ bụ osisi kpọrọ nkụ ka m ga-adara n’ala?”
20 Ọ na-aracha ntụ.+ Obi ya nke a ghọgburu aghọgbu eduhiewo ya.+ Ọ naghịkwa anapụta mkpụrụ obi ya, ọ dịghịkwa asị: “Ọ́ bụghị ihe ụgha ka m ji n’aka nri m?”+
21 “Cheta ihe ndị a, gị Jekọb,+ cheta ihe ndị a, gị Izrel, n’ihi na ị bụ ohu m.+ Ọ bụ m kpụrụ gị.+ Ị bụ ohu m. Izrel, agaghị m echefu gị.+
22 M ga-ehichapụ mmebi iwu gị dị ka à ga-asị na e ji ígwé ojii kpuchie ya,+ hichapụkwa mmehie gị dị ka à ga-asị na e ji ígwé ojii kpuchie ya. Laghachikwute m,+ n’ihi na m ga-agbapụta gị.+
23 “Tie mkpu ọṅụ, gị eluigwe,+ n’ihi na Jehova emewo ihe!+ Tie mkpu mmeri,+ unu ebe kasị ala n’ụwa!+ Nweenụ obi ụtọ, unu ugwu niile,+ tie mkpu ọṅụ, gị oké ọhịa na unu osisi niile dị n’ime ya! N’ihi na Jehova agbapụtawo Jekọb, o gosiwokwa ịma mma ya n’ahụ́ Izrel.”+
24 Nke a bụ ihe Jehova, bụ́ Onye Mgbapụta gị,+ na Onye kpụrụ gị n’afọ, kwuru: “Mụ onwe m, bụ́ Jehova, na-eme ihe niile. Ọ bụ naanị m setịrị eluigwe,+ gbasaakwa ụwa.+ Ònye ka mụ na ya nọ?
25 M na-emebi ihe ịrịba ama nke ndị na-ekwu okwu na-abaghị uru, abụkwa m Onye na-eme ka ndị na-agba afa na-eme ara ara;+ Onye na-achụghachi ndị maara ihe azụ, Onye na-emekwa ka ihe ọmụma ha ghọọ ihe nzuzu;+
26 Onye na-eme ka okwu ohu ya mezuo, Onye na-emezucha atụmatụ nke ndị ozi ya;+ Onye na-ekwu banyere Jeruselem, sị, ‘A ga-ebi na ya,’+ kwuokwa banyere obodo ndị dị na Juda, sị, ‘A ga-ewughachi ha,+ m ga-ewu ebe ya niile tọgbọrọ n’efu’;+
27 Onye na-asị ogbu mmiri, ‘Takọọ; m ga-eme ka osimiri gị niile taa’;+
28 Onye na-ekwu banyere Saịrọs,+ sị, ‘Ọ bụ onye ọzụzụ atụrụ m, ọ ga-eme ihe niile na-atọ m ụtọ;+ ọ ga-eme ọbụna ihe m kwuru banyere Jeruselem, sị, ‘A ga-ewughachi ya,’ na ihe m kwuru banyere ụlọ nsọ ya, sị, ‘A ga-atọ ntọala gị.’”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D23%26Chapter%3D44%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl